June 4, 2011 na 1:16 na
Mma ịnụ gị nwere ike na-arụ ọrụ na gburugburu Google API shutdown. Nke a na-ndoro anya m ọtụtụ ekeberi edem ke ngwa mgbakwunye. Nọgidenụ na-ahụ magburu onwe ya ọrụ!
June 4, 2011 na 3:44 na
Version 0.74 nwere nje mgbe m emelitere m version 0.73 akpaghị aka na ebe suftaculos, ọ ghọrọ m na saịtị ke Portuguese Bekee. Kedu ka m laghachi Portuguese?
June 4, 2011 na 11:31 na
Na saịtị asụsụ (na backend) ugbu a-agbanwe ndabara asụsụ ị na ekenịm ke transposh, ọdịnaya agbanwebeghị.
June 7, 2011 na 7:47 obi
Congrats na ọhụrụ tọhapụ. Ka na-eche ka mfe ọzọ / Na Mbụ translation interface. Isee
June 14, 2011 na 6:19 na
Daalụ maka etinye ọtụtụ ọrụ a! Nke a na eleghị anya, ọ bụghị nri ebe na-ajụ, kama, Ị nwere atụmatụ na-agụnye ụzọ iji nyo si Ndenye nke na-anaghị sụgharịrị? e.g, ma ọ bụrụ na admins na editọ bụ naanị ndị setịpụrụ ịsụgharị, na ha nwere ike ịhụ ihe, ma ndị ọbịa ga na-ahụ okokụre translations? Nke ahụ ga-egwu 😀
June 22, 2011 na 9:37 na
Nke a bụ ezigbo echiche n'ezie, ụzọ kasị mma ime ka ọ na-eme bụ ike tiketi na-akọwa ihe a anyị trac na saịtị
November 22, 2012 na 10:33 na
Image translation dị ezigbo mkpa mma, na ọ bụ dị ukwuu na ị mepụtara ya! Otú ọ dị, e nwere ka ọ bụla n'ụzọ nke asusu Tụkwasị oyiyi, enwere? Kasị slideshows eji Tụkwasị oyiyi, niile posts eme, N'ihi ya, ọ ga-egwu ma ọ bụrụ na nke a nwere ike jisiri otuodila.
December 5, 2012 na 1:41 na
Kacha mma echiche bụ na ị mepụtara tiketi ka anyị mee nke a na trac na saịtị, nke a abụghị na anyị na-elekwasị anya ugbu a, ma ga-ma eleghị anya a ga-mere ụfọdụ ga-eme n'ọdịnihu.